अन्तरवार्ता | NayaBishwo.com
काठमाडाैं । सरकारले केही समय पहिले विप्लव समूहकाे राजनीतिलाइ प्रतिबन्ध गर्यो । त्यस्तै देशै टुक्राउछु भन्दै विखण्डनकाे राजनीति गर्ने सिके राउतलाई मुलधाराको राजनीति गर्न भनि सहमति गर्याे । जस्ले देश टुक्राउछु भनि विखण्डनकाे राजनीति अंगालेकाे सिके राउतलाई काखी च्याप्ने ? र एकीकृत जनक्रान्तिबाट देश अगाडि बढाउँछौँ भन्ने विप्लव समूहको राजनीतिकलाई प्रतिबन्ध गर्ने ? भन्ने बिषयमा टिकाटिप्पणी हुने गरेको छ । यी यस्तै बिषयमा नेकपा स्थायी कमिटि सदस्य देबेन्द्र पौडेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश । लोकप्रिय सरकारको अलोकप्रिय काम रोकिएन । अहिले… पुरा पढौ
डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठ ( कार्यकारी निर्देशक) शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र ,भक्तपुर नेपालमा मृगौला रोगी उपचारको अवस्था कस्तो छ । करिव १० वर्षअघि तपाईले नै शुरु गरेको मृगौला प्रत्यारोपण सेवाबाट कति लाभन्वित भए ? नेपालमा मृगौला रोगीको उपचार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छ, भन्न सक्ने भएका छौं । साथै प्रत्यारोपणको सेवा पनि उपलब्ध गराउन सफल छौं । सन् २००८ बाट वीर अस्पतालबाट त्यो सेवा पनि मैले नै शुरु गरेको थिए । अहिलेसम्मको उपलब्धीलाई हेर्दा सन्तोषजनक छ । यो सेवालाई नेपालको वर्तमान संरचनाका ७… पुरा पढौ
बागलुङ । नारी उत्थानका लागि २०५२ साल कार्तिक २ गते महिला हित संरक्षण नामक संस्था गठन गरी बागलुङमा रहेका महिलाहरुको आर्थिकस्तर विकासको लागि २०५८ मा सहकारी ऐन अनुसार स्थापना दर्ता भएकाे हाे । बागलुङ नगरपालिका ३ गुठीमा रहेको संस्थाले २५ जना शेयर सदस्यहरु जम्मा गरी २ हजार ५ सयले महिला हित बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको जन्म दियो । उमा खड्काको नेतृत्वमा दर्ता भएको सहकारीले अहिले १७ औं वर्ष पार गरेको छ ।यहाँसम्म आइपुग्दा सहकारीले काँचुली नै फेरेको छ ।… पुरा पढौ
बागलुङ । जैमिनी नगरपालिकाका मेयर इन्द्रराज पौडेलले जैमिनीमा अब रिङरोड बनाएर स्मार्ट सिटीका रुपमा विकास गर्ने आयोजना रहेको बताएका छन् । उनले एक मिटरसमेत बाटो पक्की नभएको अवस्थामा अबको पाँच वर्षभित्र आमूल परिर्वतन हुने गरी आफूले काम गर्ने उनले बताए । यही आवमा मात्रै कम्तिमा २ मिलोमिटर बाटो पक्की बनाउने योजना छ । मुख्य मुख्य सडक संजाललाई ढलान गरी पक्की बाटो बनाउने सपना छ उनले भने । नयाँ विश्वको टक शो कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । नगरपालिकाको शैक्षिक सुधारको लागि… पुरा पढौ
बागलुङ । बागलुङमा रहेको अञ्चल अस्पतालको अध्यक्षमा केवी राना मगर चयन भएको तीन महिना पुग्यो । तीन महिनाको अवधिमा उनले अंचल अस्पताललाई परिर्वतन गर्नको लागि धेरै पापड बेले । म आउन भन्दा पहिले ११ जना अध्यक्ष फेरिए तर अंचल अस्पतालको दुरदशा भने कहिल्यै फेरिएन केवी राना मगरले भने । यदि अंचल अस्पताललाई आफ्नो घर सम्झेर अगाडिका अध्यक्षहरुले काम गरेको भए आज यो अवस्थाबाट अंचल अस्पताल गुर्जनुपर्ने थिएन उनले भने । म अंचल अस्पतालको अध्यक्षमा पदमा बस्नको लागि मात्रै चयन भएको… पुरा पढौ
सन्तोषको १० वर्षे बैकिङ अनुभव : मेहनतले प्रगतिको शिखर चुमे
एनआइसी एसिया बैंक बागलुङका शाखा प्रबन्धक रहेका सन्तोष राज शर्मा बैकिङ क्षेत्रमा लागेको झण्डै १० वर्ष पुग्यो । शुरुमा काष्ठमण्डप बैकमा क्रेडिट शाखामा काम गरेका उनी त्यही बैंकको बेनी र पर्वत शाखामा काम गरे । उनको प्रोमोशन पनि भयो । उनी शाखा प्रबन्धका रुपमा पनि काम गर्ने अवसर पाए । बैकिङ क्षेत्रमा बामे चाल्न सिकाएको काष्ठमण्डप बैंकमा उनले तीन वर्ष विताए । त्यसपछि उनी ग्लोबल आइएमी बैंकमा छिरे । त्यहाँ उनले साढेँ तीन वर्ष काम गर्ने अवसर पाए । त्यसपछि… पुरा पढौ
बागलुङ जिल्लाको ऐतिहासिक महत्व बोकेको कालिका कन्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालय २०७२ सालको भूकम्पले थिचेपछि अहिले तङ्ग्रीदैको अवस्थामा छ । बागलुङ नगरपालिका ३ कम्पुटोलमा रहेको सो विद्यालयमा भूकम्प पछि नेपाल सरकार, दातृ निकाय ,स्थानीय तह ,विभिन्न संघसंस्थाको, पुर्व विद्यार्थी र शिक्षाप्रमीहरुको सहयोगमा भौतिक पूर्वधार निर्माण भएका छन् । तर अझै पनि त्यहाँको शैक्षिक स्तर भने उकासिन सकेको छैन । कुनै बेला जिल्लाकै शत प्रतिशत विद्यार्थी एसएलसीमा उत्र्तीण गराउने विद्यालय धौलागिरीकै प्रविधिमैत्री विद्यालयमा गनिन्थ्यो तर पछिल्लो समयमा विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर उकास्न नसकिएको… पुरा पढौ
बागलुङ जिल्लाको सहकारी आन्दोलनलाई शसक्त बनाउँदै आएका चण्डीप्रसाद शर्मा पौडेल दुई कार्यकालको लागि बागलुङ जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लिमिडेटको नेतृत्वमा पुगे । २०५६ सालमा एकता सहकारी संस्थाबाट जिल्लाको सहकारी आन्दोलनमा होमिएका पौडेल सिवाइसी सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष समेत हुन् । ९४ सहकारी आवद्ध रहेको उक्त बागलुड बचत तथा सहकारी संघको नेतृत्वमा हालै सर्वसम्मत रुपमा चयन भएका पौडेलले जिल्लाको सहकारी आन्दोलनलाई उचाईमा पु¥याउन आफूले कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने बताए । सहकारीमैत्री समाज निर्माण गर्दै हरेक नागरिकसम्म सहकारीको पहुँच पु¥याउनको… पुरा पढौ
संघीयताका आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्ने क्रममा सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचना पनि फेरिएको छ । यसअघि केन्द्रीय सरकारको मातहत रहेका जिल्ला स्वास्थ्य वा जनस्वास्थ्य कार्यालय अहिले प्रदेश सरकारको मातहत ल्याईएको छ । बागलुङको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको पनि नाम फेरिएर ‘स्वास्थ्य कार्यालय गण्डकी प्रदेश बागलुङ’ भएको छ । प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालयले गर्छ यी काम प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालयलाई प्रदेशस्तरको स्वास्थ्य सेवाबारे काम गर्ने र स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग तथा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ । संविधानअनुसार आधारभुत स्वास्थ्य… पुरा पढौ
सामाजिक कामको चासो र चिन्ताले रातमा निद्रा नलाग्ने मान्छे पनि हाम्रै समाजमा छन्, भन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ । किनभने अहिलेको मान्छे चाहेर वा नचाहेरै पनि आफ्नो हित, प्रगति र स्वार्थ पूरा गर्ने दौडमा छ । आफ्नो वा परिवारको हित प्रवद्र्धन गर्न होस् या पैसा कमाउन । मानिसलाई आफ्नै काम फत्ते गर्न भ्याई नभ्याई छ । अक्सर यी यस्ता व्यक्तिगत काम र बाध्यता बिच जेलिएका धेरै मान्छे भेटिने नेपाली समाजमा सामाजिक प्रगतिमा अहोरात्र खट्ने मानिस पनि छन् । यस्तै एक पात्र… पुरा पढौ